Baidoa Media Center » Maxaad Shirib ka taqaan? Q:1AAD Friday, May 24th, 2013
June 20, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Suugaan waa eray kulmiyana: hawraar kastoo hannaan, habdhac iyo heenso u gaara leh. Suugaannna asal ahaan waxay ka timaaddaa hadal, hadalkana waxaa loo kala saaraa: Tix iyo Tiraab ama Hawraar iyo Hal abuur. Maansadu waxay u kala baxdaa qaybo badan, sida: Gabay, Guuroow, Geeraar, Jiifto, Shirib, Masafo, Saar, Buraanbur, Hees, oo dhawr nooca ah, Hees Hawleed, Hees Ciyaareed, Hees Carruureed iyo Heesaha cusub, ee iminka lagu xareediyo. Suugaanta waxaa kale oo ka mid ah Maahmaahda, Murtida, Halxiraalaha iyo Hawraaraha Halqabsiga ah, ee sida joogtada ah loo adeegsado mid walba xilligeeda iyo xuskeeda gaarka ah lagu xusho.
Suugaan wuxuu Abwaan Maxamed Ibraahin Warsame “Hadraawi” Maansadii “Sirta Nolosha” ku fasiray: “Suugaantu Gogol weeye” tuducdan ayaa waxay qeexday suugaani inay tahay gogol, gogolina ay tahay wax aan laga maarmin, haddana aan koobnayn oo fidsan. Tusaale: Dhulku waa gogol, korkiisa waxa saaranina maaha wax aragti, ogaal iyo aqoonba lagu koobi karo, sidaa awgeed, waxaa inoo caddaanaya in erayga Suugaani la mid yahay Dhulka, oo dhulka waxaa oogadiisa saaran aan maan lagu koobi karin, Murtiyada kala duwan ee Tix iyo Tiraabba leh ama Hadal iyo Hawraarna loo adeegsado, badideedu inay isugu biyo shubanayso dedan iyo daalacanbaSuugaan.
Marti soo dhowoo naga rabtiyo duco inay dhaafto Intaas oo dhan baad wada dhacdaye dhimo ha noolaane